“ Maraykanka Wuxuu Dhoofsaday Dadkii Muqdisho Kula Dagaalamay 1993…” | Berberatoday.com
“ Maraykanka Wuxuu Dhoofsaday Dadkii Muqdisho Kula Dagaalamay 1993…”
Wargeyska The Great American ee internet-ka wax ku qora ayaa daabacay faallo uu cinwaan uga dhigay “Muqdisho waxay timid Minneapolis”.
faallada uu qoray wargeyskan ayaa lagu billaabay sheekadii “wacdarada lahayd” ee uu soo saaray Ridley Scott ee “Black Hawk Down,” taas oo laga dheehday geesinimo iyo naftii-huranimo ay muujiyeen dad yar oo Maraykan ah.
“Black Gawk Down,” wuxuu ka faalloonayaa wixiii dhacday 1993-dii, markaas oo Maraykanka uu isku dayay inuu soo qabto Hoggaamiye Kooxeedkii xilligaas, Jeneraal Maxamad Faarax Caydiid oo ku sugnaa magaalada Muqdisho.
Sheekada runta ah ee wixii meesha ka dhacay waa arrin naxdin leh oo dhiig ayaa meesha ku daatay, halka 19 askari oo Maraykan ahna la dilay, hasayeeshee sheekada uu sameeyay Ridley Scott waxay ka dhigeysaa in ciidammada Maraykanka ay ugu dambeyntii dabbaaldageen oo ay ka guuleysteen dagaallamayaal ajnabi ah.
Sheekada waxay soo bandhigeysaa dhinaca wanaagga ee Soomaalida, waxaana arrintaas laga dheehan karaa qeybta ay dhallinyarada Soomaalida ah ee dhoolacadeynaya ay la socdaan askarta Maraykanka.
Waxaa xaqiiqo ah, in arrinta ay u horseedi karto in xitaa dadka waddaniyiinta iyo Jamhuuriga Maraykanka ah, ay ka naxaan Soomaalida, oo kaddibna codsadaan in gargaar bani’aadanimo la gaarsiiyo.
Ma jirin hal qof, oo daawaday filimka “Black Hawk Down” oo hal mar xitaa ka fakaray inay haboon tahay in tiro badan oo dadka Soomaalida ee mayalka adag loo soo dhoofiyo Maraykanka, iyadoo aan laga baaraandhagin dhibaatada ay arrintaasi ku keeni karto bulshada Maraykanka.
Qormada wargeysku waxay leedahay: “Waa run, oo waxaa haatan nasoo gaaro wararka naxdinta iyo argegaxa leh ee ka imaanayo Minnesota, halkaas oo la geeyay tiro badan oo ah dadkii qeybta ka ahaa “Black Hawk Down” , oo intooda badan mayal adag, oona la soo cabsiiyay Maraykan nacayb”.
“Qofka Muslinka ah ee inta la ogyahay ugu mayalka adag oo Maraykanka maanta ku nool, waa Ilhaan Cumar, oo ka soo jeeddo Muqdisho. Lix sano jir ayay ahayd markii ay dhacday qisada “Black Hawk Down”.
Waxay gashay Jaamacadda Woqooyiga Dakota, kaddibna waxay ku biirtay Jaamacadda Minnesota, ka hor inta aysan qolyaha xoriyadaha u dooda suuragelin inay ka mid noqoto labadii haween ee Muslinka ahaa ee markii ugu horreysay xubnaha ka noqday aqalka Kongreska ee Maraykanka.
Wargeysaka ayaaa sheegay in IlhaanCumar ay si daacad ah uga hadasho waxay aaminsan tahay, oo ah in aysan jeclayn Maraykanka.
Wuxuu sheegay in Ilhaan Cumar ay dhawaan muujisey siday u yareysanayso weerarradii 9/11.
Ilhaan Cumar ayuu wargeyska sheegay inay mar walba Maraykanka ku tilmaanto dal xun, oo aysan caddaalad ka jirin.
Maqaalka ayaa lagu xusay su’aal ah, haddii Maraykanku sidaa u xun yahay, Ilhaan fursad noocan ah miyay heli lahayd.
Waxaana muuqata ayuu maqaalka leeyahay in dadka reer Minnesota ay heleen tiro ku filan oo Soomaali ah , oo gaareysa 80,000 iyo ka badan. Ilhaan Cumar ayaa waxay dareemeysaa in ay joogto gurigeeda markay Minnesota tagto.
Hasayeeshee, dadka reer Minnesora kuma faraxsana arrintaasi. Maraykanka haddii aan nahay waxaan u baahanahay dal ay dadkiisu kala duwan yihiin, balse ay daacad u wada yihiin dalkooda, oo ayna is wada jecel yihiin.
Wargeyska ayaa maqaalka ku soo gaba-gabeeyay hadal laga soo xigtay madaxweynihii hore ee Maraykanka Abraham Lincolin sanadka markuu ahaa 1858, oo ah “in guri kala qeybsan, uusan sii jiri karin,”